Sicela buyisela lo mbhalo nge Inqubomgomo Yemfihlo nawe. Sicela ungeze ama-cookie eyengeziwe website yakho isebenzisa ngezansi (isib, Google Analytics)
Le Ingqubomgomo yobumfihlo ibeka kanjani usetshenziswa futhi avikele nanoma yiluphi ulwazi osinikeza uma usebenzise le website. uzibophezele ekuqinisekiseni ukuthi ubumfihlo bakho livikelwe. Kufanele sicele ukuba usinike imininingwane ethile ngalo bungabonakala lapho usebenzisa le website, khona-ke ungaqiniseka ukuthi kuyoba kuphela ngokuhambisana nalesi sitatimende sobumfihlo. Kungenzeka ukushintsha le nqubomgomo ngezikhathi ezithile ngokubuyekeza leli khasi. Kufanele uhlole leli khasi ngezikhathi ezithile ukuqinisekisa ukuthi niyajabula nanoma izinguquko.
nemininingwane yokuxhumana kuhlanganise ikheli le-imeyli
nolwazi lokubala ubuningi babantu ezifana ikhodi yeposi, preferences kanye nezithakazelo
eminye imininingwane efanele vo ikhasimende futhi / noma intengiso
Ngoba uhlu oluphelele lwazo zonke amakhukhi esiyiqoqayo ukubona Uhlu amakhukhi esiyiqoqayo ingxenye.
Sidinga lolu lwazi ukuqonda izidingo zakho kanye ukukunikeza isevisi kangcono, futhi ikakhulukazi ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Singaphinde futhi sisebenzise ulwazi ukuthuthukisa imikhiqizo yethu kanye namasevisi.
Singase thumela imeyili yokukhangisa mayelana nemikhiqizo emisha, Izipesheli noma eminye imininingwane esicabanga ungase uthole ezithakazelisayo usebenzisa ikheli le-imeyli oye enikeziwe.
Ngezikhathi ezithile, singase sisebenzise ulwazi lwakho ukuxhumana nawe ngezinjongo zocwaningo emakethe. Singase uxhumane nawe nge-imeyili, ifoni, ngesikhahlamezi noma nge email. Singaphinde futhi sisebenzise ulwazi ukuze wenze website ngokusho izithakazelo zakho.
Ikhukhi yifayela elincane ucela imvume ibekwe drive yekhompyutha yakho hard. Uma uvumelana, ifayela wanezela kanye cookie ye kusiza hlaziya web traffic noma lets wazi uma uvakashela isayithi ethile. Makhukhi avumela izinhlelo zokusebenza zewebhu ukuthi aphendule ngabanye. Isicelo web kungaba ahlele imisebenzi yayo nezidingo zakho, aveze nezinto azithandayo nangazithandi ngokubuthana futhi sikhumbula ulwazi mayelana izintandokazi zakho.
Sisebenzisa traffic log amakhukhi ukubona ukuthi yimaphi amakhasi zisetshenziswa. Lokhu kusisiza kuhlatiya idatha mayelana lewebhu traffic futhi sithuthukise website yethu ukuze sihlanganise nezidingo ikhasimende. Sisebenzisa lolu lwazi for izibalo analysis ngezinhloso bese idatha esuswa uhlelo.
Sekukonke, Amakhukhi wenqubo asiza us ukukunikeza a website kangcono, by lisisiza kanjani ukuba ukuqapha yiziphi amakhasi uthola ewusizo futhi yiziphi ungathandi. Ikhukhi kuwo + nangayiphi indlela kusinikeza ukufinyelela ikhompyutha yakho noma yiluphi ulwazi ngawe, ngaphandle idatha ukhetha ukwabelana nathi. Ungakhetha ukwamukela noma ngenqabe cookies. Iziphequluli amaningi ayaye ngokuzenzakalelayo amukele amakhukhi, kodwa ungakwazi ngokuvamile guqula isiphequluli setting sakho ukwala ama-cookies uma uthanda. Lokhu kungase kukuvikele ngalokugcwele yini ematfuba ekuba website.
Ungakhetha Ukukalela ukuqoqwa noma ukusetshenziswa kolwazi lwakho siqu ngezindlela ezilandelayo:
noma ngabe kunini uma ucelwa ukuba ugcwalise ifomu le website, bheka ibhokisi ongakuchofoza ukuba kubonise ukuthi awufuni ulwazi hhayi ukuba asetshenziswe muntu ngqo zokumaketha
uma uke wavuma ukuba nathi ngokusebenzisa ulwazi lwakho lomuntu siqu ngqo zokumaketha, ungase ushintshe ingqondo yakho nganoma isiphi isikhathi ngokubhalela noma uthumele i-imeyili us at sales@armati.biz
Thina ngeke adayise, ukusabalalisa noma ukuqasha imininingwane yakho epheqelezu besithathu ngaphandle uma kudingeka imvume yakho noma umthetho ukwenza kanjalo. Singasebenzisa ulwazi lakho siqu ukuthumela ulwazi asetshenzisiwe mayelana besithathu esicabanga ungase ukuthole ezithakazelisayo uma usitshele ukuthi ufisa lokhu kwenzeke.
Ungacela imininingwane ye ulwazi lwangasese sibambelela ngawe ngaphansi Data Protection Act 1998. Imali encane kuyoba ikhokhwe. Uma ungathanda ikhophi ulwazi oluphethwe kuwe sicela ubhalele.
Uma ukholwa ukuthi noma iluphi ulwazi thina ubambe kuwe ayilungile noma akuphelele, sicela ubhalele noma imeyli nathi ngokushesha ngangokunokwenzeka, ekhelini elingenhla. Sizokwenza ngokushesha alungise noma yiluphi ulwazi atholakala ingalungile.
Uhlu amakhukhi esiyiqoqayo
Ithebula elingezansi ibala cookies siqoqa futhi imiphi imininingwane bona ukugcina.
Ukuba nobudlelwane inqola yakho.
Igcina ulwazi isigaba ekhasini, uvumela ukuthi ukubonisa amakhasi ngokushesha.
Izinto ukuthi onakho Qhathanisa Imikhiqizo uhlu.
Imali yakho ayethanda
An version abethelwe we-ID yakho yekhasimende ne esitolo.
Isikhombi uma Okwamanje ungene esitolo.
An version ngekhodi aleli qembu ikhasimende ningabakaKristu.
Igcina ID Ingxenye Customer
A flag, okuyinto lubonisa ukuthi ukulondoloza isikhashana ayisebenzi noma cha.
Wena sesssion ID on the server.
Ivumela izivakashi ukuhlela oda zabo.
Isigaba sokugcina uvakashile.
Umkhiqizo yamuva kakhulu oye wakubona.
Ikhomba ukuthi umyalezo omusha utholiwe.
Ikhomba ukuthi it ovunyelwe ukusebenzisa isilondolozi.
Isixhumanisi ulwazi mayelana inqola yakho kanye nomlando ebukela uma uke wabuza isayithi.
I-ID kwanoma iyiphi kokhetho olubalulekile oluzobanjwa usanda bavotela.
Ulwazi ngalokho kumapholi uvotele on.
Izinto ukuthi usanda kuqhathaniswa.
Ulwazi on imikhiqizo nge-imeyili kubangane.
Umbono esitolo noma ulimi oyikhethile.
Ikhomba ukuthi ikhasimende bavunyelwe ukusebenzisa amakhukhi.
Imikhiqizo ukuthi kulibuka.
An uhlu ngekhodi imikhiqizo Kungezwe ohlwini lwezifiso wakho.
Inani lwezinto Wishlist yakho.